Ikhambi elihle kakhulu lephunga lokuthuthumela
Ukuhlukaniswa kwesithukuthelo kumuntu ngesikhumba kungumzimba wemvelo. Ngesikhathi esifanayo, kanye nokujuluka, izinto ezengeziwe zisuswa emzimbeni wethu. Ukuzibopha ngokwabo akusho ukuthi kunuka, kodwa uma kunikezwe, kuhlangene nama-bacterium, okwenza kube iphunga elimnandi. Ebusika, ukujuluka akukona okuhle. Inkinga ikakhulukazi nephunga lokufiphala kuzinyanga ezishisayo. Futhi ukujuluka kunikelwe kakhulu ngesikhathi sokuvivinya umzimba. Ukujuluka ngokweqile kungahlotshaniswa nokucindezeleka, ukuphazamiseka kwemithi kanye nezinye izimbangela. Iningi labantu lizwa ukungahambi kahle lihambisana nokuthuthumela. I-Cosmetologists sekuyisikhathi eside ikhathazekile ngenkinga yokuthuthumela. Ngokusho kochwepheshe abaningi, i-antiperspirant - ikhambi elihle kakhulu lephunga lokuthuthumela.
Ibizo elithi antiperspirant livela egameni lesiNgisi elithi antiperspiration, elihumusha ngokuthi "ngokumelene nokuthuthumela."
Iphunga elibi kunazo zonke futhi elibukhali livela lapho liphuma emabhasi ase-axillary. Njengomthetho, abaphikisi abaphikisana nezidakamizwa bathinta izigulane zithukuthuku, ukuvimbela umsebenzi wabo. Abaningi be-antiperspirants bafaka i-zinc kanye ne-aluminium usawoti, okwenza amathrekhi esikhumbeni, okwenza ukuba badonsa ngaleyo ndlela bavimbele ukujuluka okukhulu ngokweqile. Ama-antiperspirants asebenza kahle kunawo wonke yiwo anempahla enjenge-alumino-chloride-hexahydrate. Ukuhlushwa kwe-alumino-chloride-hexahydrate 10-15% isetshenziselwa ukujuluka kwamabhasi ase-axillary, 20-40% ngokukhukhuma kwezintende nezinyawo.
Ezikhathini zanamuhla zokulwa nezidakamizwa, izinto ezilwa namabhaktheriya ziyasetshenziswa, ngaleyo ndlela ziqede iphunga elimnandi. I-sweat yi-98% yamanzi, i-2% esele yenziwe ngezinto eziphilayo - i-glucose, ama-hormone, ama-salti. Ama-bacteria asebenzisana nezinto eziphilayo eziqukethe ukujuluka, okuyimbangela yesiphunga elimnandi lokuthuthumela.
Kunezinhlobo eziningana zama-antiperspirants: ama-rollers, izinti, ama-sprays, ama-gel. I-sprays ye-animeperpirant iyinto elula kakhulu ukuyisebenzisa, ngeshwa, inesiphambeko - ayisebenzisi kahle. I-ethyl utshwala, okuyinto evame ukuyingxenye ye-spray, hhayi okwenyusa isikhumba esibucayi njalo, ikakhulukazi ngemva kokushefa. Njengamanje, abakhiqizi bakhiqiza ama-sprays ngaphandle kwe-ethyl alcohol. Izintambo eziphikisanayo ezilula futhi ezilula zokusebenzisa. Ngokuvamile izinti zinephunga elimnandi, elikuvumela ukuthi usebenzise amafutha. Izinduku nazo azikho ngaphandle kweziphambeko, njengombuso, zingashiya imidwebo ezembatho. Ikakhulukazi lokhu kuphazamiseka kuyabonakala uma izingubo zingumnyama embala. Ngezinye izikhathi izidakamizwa ezingakwazi ukuwayeka zingakwazi ukuwa, zibuthelele emagqumeni, okuyinto, okwamanje, akusizi inzuzo. Elula futhi ewusizo yizidakamizwa zebhola, ziyi-compact, i-economics, futhi ilula kunama-aniperspirants aqinile. Ama-déodorants amabhola athandwa kakhulu, njengoba ehlisa isikhumba, abe nomthelela wokulwa nokuvuvukala, okwenza lolu hlobo lwe-deodorant ekahle ngesikhumba esibucayi. Njengamanje abaphikisana nezidakamizwa bavele emakethe - ama-gel, okuyiziqondiso ezintsha zamadododants of lolu hlobo. Ama-déodorants e-Helium avulekile, ungashiyi imidwebo yezingubo, usebenzise kalula esikhumbeni.
Enye yezingqinamba ezinkulu eziphikisana nezidakamizwa yizindawo ezimhlophe namachashaza asele ezembatho nasesikhumba ngemuva kwesicelo sabo. Cishe bonke abakhiqizi baqaphela lokhu okungahambi kahle, mayelana nokuthi bahlakulela amafomula amasha amasha angasusa kanjani lesi siphambeko. Kodwa ukuthembela izikhangiso zokukhangisa eziphezulu akufanelekile, ngoba ukucacisa ukuthi ngabe amaqabunga amachiza we-deodorant noma cha, ungakwazi kuphela ngesilingo nesiphambeko.
Ama-déodorants amaningi anamuhla, aklanyelwe ukubhubhisa iphunga elimnandi, kuyilapho ekhukhumezekile, akanalo umthelela omkhulu. Ama-deodorants anjalo, alwa nokukhula kwama-bacteria, okuvusa amafutha angamnandi.
Ukuze ukwandise ukusebenza kahle kwabaphikisana nezidakamizwa, kufanele wazi ukuthi ungayisebenzisa kanjani ngokufanele. Njengoba izifundo kule ndawo zibonisiwe, kusemqoka ukusebenzisa ama-deodorants kusihlwa noma ekuseni, noma kusihlwa kuphela. Umphumela kusuka ekusebenziseni uzoba ngaphezulu kakhulu uma usebenzisa i-antipersper kuphela ekuseni. Ukuze ungacasuli isikhumba, kubalulekile ukuhlanza ngokuphelele ama-antiperspirant 6-8 amahora emva kokusebenza kwawo.
Kumele kukhunjulwe ukuthi abaphikisana nezidakamizwa bathinta umsebenzi wezinhlayiya ze-sweat, ezingabangela izinqubo ezinkulu ezivuthayo, ngokusetshenziswa ngokweqile kwalezi zidakamizwa. Ukuvimbela lokhu kungenzeki, imithetho eminingana kufanele ikhunjulwe, i-antipersperant kufanele isetshenziswe ngaso sonke isikhathi ekuhlanzeni nasekuhlanjeni isikhumba, ungasebenzisi ama-deodorant angaphezu kwezikhathi ezingu-1-2 ngosuku, sebenzisa ngezikhathi okungenani amahora angu-7, futhi njalo ugeze kahle isikhumba esiphambene nomzimba . Kuyinto efiselekayo ukuphunga isikhumba ngaphambi kokusebenzisa i-antiperspirant. Ungasebenzisi lo mkhiqizo ebhishi, ngoba kunengozi yokuguqulwa esikhumbeni.
Njengoba wonke umuntu uyazi, ngesikhathi sokuzikhandla ngokweqile ngenkathi edlala imidlalo, ama-sweland agwema ukuqala ukukhukhumeza, lokhu kuyinqubo engokwemvelo, ngezikhathi ezinjalo, ukusebenzisa le remedy yokukhukhumeza, kuyaphikisana, njengoba umzimba uhlanzwa ngamacandgi ahlukene, futhi i-déodorant izoyivimbela.
Amanye ama-antiperspirants aqukethe i-aluminium chloride ekubunjweni kwawo, anganciphisa ukufihla ukukhukhumeza, kepha ukusetshenziswa okuqhubekayo nokuqhubekayo kwalokhu okuphikisana nomuntu kuyandisa ingozi yomdlavuza webele. Ukuze kunciphise umthelela onobuthi we-aniperspirant emzimbeni womuntu, abakhiqizi banamuhla basebenzisa i-aluminium hydrochloride, efana nezici zayo ku-aluminium chloride.
Manje, bantombazane abathandekayo, uyazi ukuthi yini egcwele ukusetshenziswa kwama-antiperspirants asekelwe ku-aluminium kanye ne-zinc usawoti, ngakho-ke kungcono ukuyeka ukukhetha kwakho kuma-deodorants angenawo lawawoti. Kudingekile ukuthi usebenzise ama-antiperspirants kuphela uma kunesidingo, ngoba abaphikisi abaphikisa abantu benza kube nzima ukushisa ukushintshana, ukuhlanza nezinye izinqubo emzimbeni. Ngesinye isikhathi ikhambi elihle kakhulu lokuthuthumela livele nje ukugeza izimpumputhe kaningi.
Umphumela wokweqa izindebe empilweni yomuntu
Izimonyo zezokwelapha - izimonyo zokwelapha
Izimonyo ezinhle kakhulu zokunakekela isikhumba
Sebenzisa izimonyo ngolwazi
I-Turkey fillet nama-oranges
Amanxeba: Usizo lokuqala lwamanxeba
Inkukhu ye-Chicken ne-broccoli nomango
I-fibre ngumthombo wempilo
Ukuthuthukisa imidlalo yezingane zesikoleni esiphakeme
Ukuthandana ngama-ejenti womshado
Ukupheka kweladididi zasolwandle
Isimo sezulu eGelendzhik ngoJulayi 2016 senzelwe. Ngokuvamile ukushisa komoya namanzi eGelendzhik ngoJulayi
I-trimester yesibili yokukhulelwa. Izinzuzo kanye ne-Cons
Ukudla kwebhishi: ulahlekelwe isisindo elangeni!
Indlela yokuhlanza igazi ngokudla
Smoothies of mango kanye amajikijolo